Ukuqhathaniswa kwamacala ohlangothini lwemiqathango ye-ACT I-Admissions Data kwiiKholeji zeDelaware
I-Delaware, njengenye yezona zinto ezincinane kunazo zonke kweli lizwe, unemigangatho emine yeekholeji ezingenakuncedo nakwiiyunivesithi, kodwa ezo zikolo zibonelela ngeendlela ezikhethekileyo kubafundi abanezigaba ezahlukeneyo zokulungiselela iikholeji. Imilinganiselo yee-admissions zivela kwiYunivesithi yaseDelaware ngokukhethekileyo kwizikolo ezimbalwa ezamkela phantse bonke abafake izicelo. Ezinye zezikolo zifuna izikolo zokuvavanya ukusuka kwi-SAT okanye IMTHETHO, ezinye zivavanywa-ezikhethiweyo, kwaye isibini sinikeza ukuvuma okuvulekileyo.
UMthetho weeKholeji zeDelaware Izikolo (phakathi kwe-50%)
IDelaware State University 17 21 15 20 16 20
Ikholeji yaseGoldey-Beacom Ukuvavanywa-Okungenayo ukuKwamkelwa
KwiYunivesithi yaseDelaware 22 29 22 28 22 28
IWesley College 15 17 13 19 15 17
I-Widener University-Delaware Campus Vula ukuVunywa
KwiYunivesithi yaseWilmington Vula ukuVunywa
Itheyibhile elixhaseneyo ngekota libonisa amanqaku omThetho we-50% phakathi kwabafundi abathweswe izikolo. Ukuba amanqaku akho angena ngaphakathi okanye ngaphezulu kwezi zigaba, ujolise ekumiseni. Ukuba izikolo zakho zincinci ngaphantsi kweenombolo eziphantsi, gcinani engqondweni ukuba abafundi abangama-25% ababhalisile bangaphantsi kwezo zidweliswe.
Ngokuqhelekileyo, qiniseka ukugcina imiqathango ye-ACT ngokucacileyo. Phantse zonke iikholeji zelizwe lonke, amagosa avumelekileyo ngokubanzi banomdla ekuboneni irekhodi elomeleleyo lezemfundo kunamanani aphezulu ovavanyo.
Abafundi abanamanani aphantsi, kodwa amabakala aphakamileyo kunye neentlobo zemisebenzi yexesha elithile okanye amava osebenzayo banamathuba afanelekileyo wokuvunywa; ezininzi zezikolo zijonge ezi zinto, kwaye ezinye ziza kuthathelwa ingqalelo imilinganiselo epheleleyo njengesicatshulwa sakho yesicelo , imisebenzi yangaphandle kunye neencomo zengcebiso .
Izinto ezinjengelifa lemveli kunye nokubonisa umdla kungenza umehluko.
Ukuba uhlawula umgangatho ophantsi kumvavanyo we-ACT, kodwa usenokuba nexesha ngaphambi kokufaka izicelo kwizikolo, unako ukuhlala ufumana umvavanyo kwaye uzama ukuphucula amanqaku akho. Nangona ufumana ukuvavanywa emva kokuba uthumele izicelo zakho, unokubuyisela amanqaku akho aphezulu okuvavanya esikolweni, kwaye kufuneka athathe loo manqaku aphezulu kwi-akhawunti. Qinisekisa ukuba uhlolisise iwebhusayithi nganye yesikolo ukuba ufumane ulwazi olusesikweni malunga neemfuno zabo kwaye ufunde i-specifica malunga nokuthumela amanqaku okuvavanya.
Qaphela ukuba i-SAT ininzi kakhulu kwiDelaware kunomthetho, kwaye kutheni i-Wesley College ingafaki idatha ye-ACT. Ukuze ufumane ingqalelo indlela umlinganiselo wakho we-ACT ulinganisa ngayo amanqaku e-SAT, sebenzisa le tafile yokuguqulwa kwe-SAT-ACT .
Olunye UMTHETHO Iingqungquthela:
IMITHETHO YEMITHETHO YAMANYE AMANZI
I-Admissions yeeKholeji zoMntu -Nika iGoth ithuba
I-Clovis, amaMatshi aMnyama, kunye neziNdawo eziPhezulu
Isikhokelo sokusebenzisa ngokufanelekileyo izixhobo ezingapheliyo ngesiSpanish
Iincwadi eziPhambili zokuPenda kweeMpahla
Isipho Somoya Siprofeto
Shawn Johnson Igalari yezithombe
I-LSAT Ukuqiqa ngeengqiqo Imibuzo yokuSebenza
Indlela Yokukwazi Ukuba Ukufundisa Ngaba Umsebenzi Olungileyo Kuwe
Uludwe lwezobuGcisa beMidlalo yokuLwa kweMidlalo